Telefoonnada Basaasa ™ - Dib u eegis madax-bannaan oo basaasnimo moobiil ah oo uu sameeyay khabiir Jeff Tinklet
Waan hubaa in qof walbaaba la yaaban yahay midka moobiilka moobiilka ee software basaasku iibsado?
Waxaan Diyaarinay Liis - 4 Basaas Telefoon Ugu Wanaagsan
Telefoonada Basaasida ayaa kugula talinaya FlexiSPY as XALKA BILAASHKA TALOONKA WELLKA UGU FIICAN sanadka 2020! Waxay ku wada xoog badan tahay hal xal kormeer. Qiimaha qiimuhu wuu ka yara sarreeyaa laakiin dhinaca kale, wuxuu leeyahay dhammaan astaamaha basaasnimo ee horumarsan, waa mid la isku halleyn karo, shaqaalaha taageerada macaamiisha waa weyn yihiin sidoo kale daabacaadda 'EXTREME', waxaa lagu siiyaa barnaamij sirta ah oo bilaash ah.
Sidoo kale, muuqaalka cusub ee hal-abuurka ah waa adeeg rakibidda fog ee macaamiisheenna.
Hadda waxaad ballansan kartaa kalfadhi fog oo aad la leedahay farsamo yaqaan khibrad leh, kaas oo sameyn doona xididka / JAILBREAK bartilmaameedsaday aaladda mobilada iyo rakibi FlexiSPY adiga.
Hubi shaqsiyan DIB U EEGISTA BILAABKA FLEXI.
BILAABO Basaasinta Hada -> XALKA UGU FIICAN FlexiSPY
mSpy ayaa dhawaan cusbooneysiisay barnaamijkeeda. Hadda waxaa fiican inaad taleefan u dirto basaas aan u baahnayn rujin isla markaana la socon kara iPhone-ka iyada oo aan lagu rakibin barnaamijka taleefanka gacanta. Waxaa lagula taliyay in aan loo helin Xal u helida JAILBILA.
Hubi shaqsiyan DIB U EEGIDDA MSPY.
BILAABO Basaasinta Hada -> MAYA JAILBREAK XAL mSpy
3. Basaasida Mobile Highster
Highster Mobile Spy wuxuu ahaa mid kamid ah kuwa ugu iibinta badan barnaamijyada basaasnimada, maxaa yeelay waxaad heli jirtay muuqaalo badan iyo qiimo jaban. Ma jirin wax barnaamij kale oo basaasnimo ah oo suuqa kaa siin jiray hab ka jaban oo aad ku basaasto qof leh astaamo sidan oo kale ah. Sidoo kale, waxay ahayd mid aan la ogaan karin oo aad u fudud in la rakibo. Faa'iido kale ayaa ahayd in liisankaasi uu ahaa mid noolaa sidaa darteedna aysan jirin wax bil ah oo rukhsad ah!
BADBAADINTA SII SIYAASADA BADAN EE MAGAALADA AYAY LEEYIHIIN DHIBAATOOYIN KASTA, WELIGUNA MA SHAQAYN DOONO.
Hadda waxaan kugula talineynaa mSpy inay tahay tan labaad ee ugu raqiisan, waxqabadka wanaagsan, iyo beddel tayo sare leh.
BADAN -> QIIMO BADAN OO mSpy
4. Telefoonka Spyera
Telefoonka Spyera waa softiweerka lagu sameeyay qibrad uruurinta. Waxay si joogto ah u casriyeeyay ay app basaas iyo maanta waxay leeyihiin software basaas ganaax. Dhinaca kale, barnaamijkani waa mid aad uga qaalisan waxa aad hesho. Si kastaba ha noqotee, barnaamijka basaasnimada Spyera waa mid deggan oo dib u eegista macaamiisha ayaa inta badan wanaagsan. Marka hadaad doorato barnaamijkan basaasnimada ah kama qoomameyn doontid. Sidoo kale, ogow! Basaasada taleefannada ayaa ku siinaya Kuuboon-dhimista Spyera illaa 30%.
BILAABO Basaasinta Hada -> XALKA DHAQAALAHA Spyera Phone
Iyo ugu dambayntiina BEST iibso software basaas telefoonka waa…
The Iibsiga ugu Fiican software basaas noqon lahaa mSpy, qiimaheeda iyo waliba xarumo basaasnimo darteed. Beddelka barnaamijkan basaasku wuxuu noqon lahaa Highster Mobile.
The TOP QIIMEYN oo ah XALKA UGU DANBAYSAN BILAASH noqon lahaa FlexiSPY taas oo runtii ah mid ka mid ah nidaamyada raadraaca ugu horumarsan ee suuqa. Software basaaskani wuxuu bixiyaa dhammaan sifooyinka loo baahan yahay basaas xirfad leh sidoo kale wuxuu ku siinayaa farsamo yaqaan, kaas oo xidid u noqon doona / xiri doona bartilmaameedka qalabka mobilada oo kuu rakibaya FlexiSPY.
Aniga igu saabsan - qoraa
Magacaygu waa Jeff Tinklet waxaanan ahay hogaamiyaha maareynta maadada iyo wakiilka taageerada macaamiisha ee Phones Spy. Asal ahaan, waxaan hagayaa markabka, anigoo go'aansanaya waxa warka ah ee aan tebinayo, iyo sida loo daboolayo.
Waxaan ku koray Wyoming, inkasta oo aan hadda ku noolahay New York, qalbigaygu wuxuu ku jiraa buuraha Highlands.
Maxay macaamiisheennu ka fikirayaan?
"Ragga oo dhami waa isku mid. Khiyaanooyinka khiyaanooyinka. FlexiSPY waxaan ku ogaaday inuu xiriir la yeeshay hal gabar oo keliya laakiin laba gabdhood. Ma qiyaasi kartid sida aan u naxay. Adduunyadaydu waxay ku jajabtay wax yar gudahood. Ma oggolaan karo tan ayaa mar kale dhaceysa. Wixii hada ka dambeeya marwalba waxaan u isticmaali doonaa softiweerkaan si aan u basaaso saaxiibadeyda. Waa in aan lagu kalsoonaan.
"Waxaan soo iibsaday Highster Mobile. Softiweer weyn. 4 maalmood gudahood waxaan ku cadeeyay shakigeyga. Waxay aheyd mid xanuun badan laakiin hada waxay kasii fiicantahay 10 sano kadib. Haweeneydaas waxaan qorsheeyay mustaqbalkeyga. Xitaa waxaan qiyaasayay sida caruurteena ay u ekaan doonaan. Waxaan jeclaan lahaa inaan tan iibsado softiweer hore. Mahadsanid telefoon basaas, Mark. "
"Layaab malahan warbixinadiisa inay xun yihiin, gaabanyihiin isla markaana aan xirfad laheyn. Waqtigiisa intiisa badan wuxuu ku qaatay shabakada taleefanka gacanta ee Iphone. Waan ku faraxsanahay waxaan iibsanayaa barnaamijyada basaasida taleefanka. Isla markiiba waan ruqseeyay. Kadib markaan tusay cadeyn wuxuu ogolaaday inuu baxo mushaar la'aan. Waan keydsaday. lacag badan oo kombuyuutarkan ah. "
Waxaan tijaabineynaa barnaamijyada basaasida taleefanka waana ku siineynaa free rewiews iyo hagayaal.
Waxaan bilownay inaan ka caawinno dhagaystayaasheena gudaha 2012.
Haddii aad ka heshay hagayaasheena kuwo qiimo leh, fadlan naga caawi inaan nolol ku sii noolaano adoo ka iibsanaya abka khadka xiriirka aan la leenahay.
Barnaamijyada ugu Fiican
Faallooyinka FlexiSPY & Qiimeynta 2022 - Faa'iidooyinka, Qasaarooyinka & Xukunka
mSpy Faallooyinka & Qiimeynta 2022 - Faa'iidooyinka, Qasaarooyinka, Guudmarka
Highster Reviews & Rating 2022 - Faa'iidooyinka, Qasaarooyinka & Xukunka
Faallooyinka Spyera 2022 - Spyera macaamiisha dib u eegista - Ma shaqeeysaa?
Ultimate Win-Spy Review - Sidee Loo Fogeeyaa Dib-u-eegista PC-ga!
Hones Telefoonada Basaasa | Bogga ugu weyn | Terms of Service | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | xiriirka | Ganacsiga iibka
Websaydhkani wuxuu adeegsadaa cookies si loo hagaajiyo khibradaada. Waad bixi kartaa haddii aad rabto. Waxaad sidoo kale ka hortagi kartaa cookies-ka biraawsarkaaga. Waa tan sida. Waxaan nahay dib-u-eegis xirfadle ah iyo degel tijaabo ah. Haddii aad iibsato ka dib markaad riixdo xiriiriyeheena xiriirka waxaan heli doonaa hawl yar, waxayna naga caawin doontaa inaan bixino kharashyada maalinlaha ah waxaanan sii wadi doonnaa inaan kaa caawinno sida ugu fiican ee aan awoodno, markaa xaaladdaas, mahadsanid, Jeff!
Ogolaanshaha Read More